धर्म अमृत कि विष- विचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ११, २०७६ प्रमोद मिश्र
ग्रेटर सिकागोमा मेरो निवास नजिकै क्रियायोग आश्रम छ । आश्रममा चार जनाजति गेरुवा वस्त्रधारी शाकाहारी, ब्रह्मचारी स्वामीहरू बस्छन् । म बेलाबेला ती स्वामीहरूसँग सत्संग गर्छु । ती स्वामीमध्ये पनि दुई जनासँग मेरो राम्रै हिमचिम छ । मित्र जस्तै भएका छन् । निकै हँसिला र उदार छन् । जहिल्यै गए पनि मलाई एउटा न एउटा फल दिएकै हुन्छन् । ध्यानयोगले गर्दा शान्तचित्त छन् ।
एक जनासँग म तरकारी बारीबारे विचार–विमर्श र सहकार्य गर्ने गर्छु भने अर्कासँग शास्त्र र ज्ञानगुनका कुरा । म पूर्वीेय र पाश्चात्य साहित्य र दर्शनबारे आफ्नो विषयगत अनुभव सुनाउँछु । तिनीहरू मसँग योगदर्शन र अध्यात्मका कुरा बाँड्छन् । विमर्शका क्रममा भारत र यसको संस्कृति जहिले पनि चर्चाको विषय बन्ने गर्छ ।
एक दिन यसै गुजरातमा मोदी सरकारले बनाएको पटेलको भीमकाय मूर्तिको कुरा चल्यो । स्वामीजी मूर्तिको आकार, निर्माण लागत र यसको राष्ट्रवादी विम्बबाट मुग्ध रहेछन् । मैले भनेँं, ‘भारतले विश्वलाई लौहपुरुष किन देखाउनुपरेको होला ? अमेरिकाले स्ट्याचु अफ लिबर्टी (स्वतन्त्रताकी मूर्ति) फ्रान्सबाट उपहार पाएपछि न्युयोर्क हार्बरमा राखेजस्तै कुनै महान उद्देश्य बोकेको मूर्ति राख्दा भारतीय सभ्यताबारे राम्रो सन्देश जान्थ्यो । भएन, गान्धीकै त्यत्रो मूर्ति राख्दा पनि ठिकै हुन्थ्यो, किनभने गान्धीको सत्य र अहिंसाबारे सन्देश कालजयी मानवतावादी छ । हुन त आफ्नो यत्रो विशाल मूर्ति र त्यत्रो खर्चको विरोधी नै हुने थिए, सरलजीवी गान्धी, तर यो पटेलको मूर्ति त युरोपेली उत्पादनको सबभन्दा विध्वंसकारी विचारधारा—राष्ट्रवाद—लाई भारतले स्वाट्ट निलेर विश्वमाझ आफूलाई युरोपको अन्धभक्तका रूपमा प्रदर्शित गरेको भयो । अलि सुहाएन ।’
‘हैन, भारतले आफ्नो बलियो राष्ट्रवाद देखाउन जरुरी छ,’ ती स्वामीले भने, ‘किनभने भारतमा क्रिस्चियन धर्मप्रचारकहरू निकै आक्रामक भइराखेका छन् ।’ मैले भनेँं, ‘त्यसो हो भने अम्बेडकर वा बिर्सा मुन्डाको मूर्ति बनाउनुपर्ने, किनभने धर्म परिवर्तन त आदिवासी र दलितहरूमा बढी भइराखेको छ । कतिजना ब्राह्मण क्रिस्चियन भएका छन् ? उच्च जातिकाहरूले त क्रिस्चियन स्कुलमा पढेर बडेबडे पदमात्रै ओगटेका छन् । हिन्दु धर्मको विविधता र बहुलतामाथि मलाई जति गर्व छ, त्यति नै यसको जातीय भेदभाव र छुवाछूतप्रति शरम । फेरि आदिवासी क्षेत्रमा तपाईंहरू किन जानुहुन्न ? आदिवासीहरूलाई हिन्दु धर्ममा उच्च दर्जा दिनुस् । दलितलाई उच्च दर्जा दिनुस् ।
तिनीहरू स्वयं क्रिस्चियन हुँदैनन्, किनभने सैद्धान्तिक रूपमा समान भए पनि विगत पाँच सय वर्षले प्रमाणित गरेको छ, क्रिस्चियानिटी र रंगभेदबीच अनौठो सम्बन्ध छ भनेर । अर्कातिर भारतको आदिवासी क्षेत्रका खनिज पदार्थलाई भारतको हिन्दुत्ववादी सरकारले ठूला व्यापारी घरानालाई भटाभट बेच्दैछ । यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा माओवादी विद्रोह चर्केको छ । भारतका आदिवासी माओवादी, क्रिस्चियन मिसनरी र हिन्दुत्ववादी सरकारको चेपुवामा छन् । माओवादी र मिसनरीले कमसेकम मुक्तिको आस त देखाएका छन् ! हिन्दुत्ववादी सरकारले त्यो पनि गरेको छैन । उल्टै आदिवासीको जल, जंगल र जमिन लिलाम गर्दैछ । गौमांस लुकाएको शंकामा हिन्दुत्ववादी भिडले निर्दोष मुसलमान मार्दैछ । तकवितर्क गर्ने विद्वानहरूको हत्या गर्दैछ ।’
सधैं शान्त प्रकृतिका देखिने ध्यानी स्वामिजी जंगिए । जोडदार तर्क राख्ने क्रममा मेरो पनि पारो चढ्यो र स्वर उँचो भयो । घर फर्केपछि मैले सोचेंँ— योग र ध्यान साधना गरेर चित्त शान्त र संयमित पार्न सिकाउने क्रियायोगी त धर्म र राज्यको विस्फोटक सम्मिश्रणले संयम गुमाई उद्वेलित हुन्छन् भने सामान्यजनको के हालत हुँदो हो ? उद्दण्ड र आपराधिक तत्त्वहरूको त झन् कुरै के गर्ने !
धर्म र राज्यको मिश्रण घातक र विस्फोटक अनि सधैं द्वन्द्व जन्माउने कारक हो भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ, खासगरी पाँच सय वर्षयता । आधुनिक राष्ट्रवादका जन्मदाता युरोपेली राज्यहरूले राज्यमा धर्म मिसाउँदा शताब्दियौंसम्म भोग्नुपरेको रक्तपात र नरसंहारबाट आजित भएर राज्यबाट धर्मलाई (सेपरेसन अफ चर्च एन्ड स्टेट) अलग्याउने पाठ सिके । यो रक्तरञ्जित इतिहास भोग्नुपर्दाको पाठ थियो ।
उता मुसलमान बहुल राज्यहरूमा त्यहाँका बौद्धिक र सुकिला–मुकिला नेतृत्वले इस्लाम धर्मग्रन्थमा परिकल्पित धर्म र राज्य एकअर्कासँग अभिन्न रहनुपर्ने अवधारणालाई तोड्न सकेनन् । फलस्वरूप मुसलमान बहुल राज्यमा गणतन्त्र फस्टाउन सकेन, अवस्था अझै फरक भएको छैन । जब–जब लोकतन्त्रले जरो गाड्न खोज्छ, तब–तब त्यहाँ धार्मिक अतिवादीहरूले धर्मलाई राज्यसँग एकाकार गरेर अल्पसंख्यक र महिलामाथि उत्पात मच्चाउने गर्छन् ।
त्यसबाट बच्न यात साउदी अरबमा जस्तै तानाशाही राजाले नै धर्मगुरुहरूलाई चित्त बुझ्ने खालको कट्टर धार्मिक राज्य जनतामाथि थोपर्छन् या धर्मनिरपेक्ष तानाशाह जन्मिन्छन्, सद्दाम हुसेनको इराकदेखि बेन अलीको ट्युनिसिया र कमालपासाको टर्कीमा जस्तै । श्रीलंकामा बहुसंख्यक बौद्धमार्गी सिंहली र अल्पसंख्यक हिन्दु तमिलबीच दशकौंको गृहयुद्ध र धनजनको क्षतिपछि फेरि सिंहली–मुसलमान द्वन्द्व उब्जेको छ । सयौं मानिसको ज्यान जानेगरी इस्टर सन्डेका दिन भएको आतंककारी बम विस्फोट त्यसैको परिणाम हो । राज्यसँग धर्म गाँसिएपछि भएका यस्ता हृदयविदारक घटना कति छन् कति !
बंगलादेश र पाकिस्तानमा रक्तपात र लोकतन्त्र अनि सेना बीचको जुहारी धर्ममा राज्य र राज्यमा धर्म (सियासतमा मजहब र मजहबमा सियासत) मिसाइएकै परिणाम हो । भारतमा पहिले लालकृष्ण आडवाणी अनि अहिले नरेन्द्र मोदी र अमित शाह नेतृत्वमा चुनावी सफलता पाएको हिन्दुत्ववादले सिर्जना गरेको हिंसा र त्रासको वातावरण धर्मनिरपेक्ष राज्यमा बहुसंख्यकको धर्म मिसाउने परिणाम होइन भने के हो ? धर्मले सर्वसाधारणलाई गहन जीवनदर्शन सहजै उपलब्ध गराउन सक्छ भने सजिलै ‘विषको बेलरी’ पनि हुनसक्छ, आँखा चिम्लेर यसका पछाडि लाग्यो भने ।
नेपालमा तराई–मधेस र हिन्दु पहाडलाई मिसाई भइरहेका बहुसंख्यक हिन्दुवादी प्रयास पृथ्वीनारायण, जंगबहादुर र महेन्द्रको पञ्चायती हिन्दु राष्ट्रवादभन्दा सैद्धान्तिक रूपले भिन्न हुनसक्ला, तर यसले व्यावहारिक रूपमा न मधेसीकै भलो गर्छ, नत जनजाति र दलितकै । यसले लोकतन्त्रलाई बहुसंख्यक नेपालीको रगत–पसिनाले आर्जित साझा सम्पत्ति बनाउनुको सट्टा नेपाली राज्य कथित उच्च जातीय स्थायी सत्तालाई नै सुम्पिन्छ । यसको कारण हो— नेपालको विशिष्ट हिन्दु जातप्रथा र राज्यसँग संस्थापन कालदेखि नै जात प्रथाको आन्द्रा गाँसिनु ।
यस्तो नभए पनि हिन्दु धर्मलाई राज्यसँग मिसाउनु उचित थिएन, किनभने धर्म भनेको शास्त्रसम्मत सामूहिक पहिचान हो । शास्त्र परापूर्वकालमा रचिएको समाज, जीवन र आध्यात्मबारे अलौकिक दैविक दस्तावेज हो । आधुनिक लोकतन्त्र झनेको चाहिँ मानव सिर्जित, व्यक्तिमा आधारित लौकिक शासन व्यवस्था हो, जसलाई शास्त्रको दैवी हुकुमले हैन, स्वयं व्यत्ति र व्यक्तिको समूहले छलफलद्वारा बनाउँछ पनि र लागू पनि विमर्शका आधारमा गर्छ ।
तर कस्तो खाले धर्मनिरपेक्ष राज्य नेपाललाई सुहाउँदो हुन्छ ? फ्रान्स एकखाले धर्मनिरपेक्ष राज्य हो भने अमेरिका अर्कैखाले । नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता एक किसिमको छ भने गान्धीवादी अर्कै किसिमको । फ्रान्सलाई कट्टरवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्न सकिन्छ । पुरानो राज्य (आँसियाँ रेजिम) माथि रजाइँ गरिरहेको धर्मको विरोधबाट जन्मेको फ्रान्सेली क्रान्तिपछिको फ्रान्सेली राज्यले धर्म विरोधी पहिचानलाई आत्मसात् गर्‍यो ।
फलस्वरूप त्यहाँ राज्य सम्बद्ध कुनै पनि स्थानमा सिख पगडी अनि मुस्लिम बुर्का र घुम्टो वर्जित छ भने इसाई क्रस पनि त्यक्तिकै निषेधित छ । संयुत्त राज्य अमेरिकाको स्थापना भने धार्मिक स्वतन्त्रता उपभोग गर्न भएकाले यसका डिइस्ट संस्थापक राष्ट्रपिताहरूले विभिन्न धर्मप्रथा र धर्ममा आधारित जीवन पद्धति उपभोग गर्न नै राज्यबाट चर्चलाई अलग्याए, ताकि राज्यमाथि कुनै एउटा धर्मको हैकम नहोओस् । त्यसैले त चुनाव जितेपछि तुलसी गवार्डले गीतामाथि, इलिआना उमरले कोरान र बुसले बाइबलमाथि हात राखेर कर्तव्य र गोपनीयताको सपथ लिन्छन् !
नेहरूको धर्मनिरपेक्षतालाई धर्मविरोधी होइन, नेहरू स्वयं ‘एग्नोस्टिक’ भएकाले, धर्मतटस्थ भन्न मिल्छ । धर्मलाई सहनु ठिकै भए पनि पछिलाग्नु ठिक होइन भन्ठान्थे नेहरू । गहन आध्यात्मिक गान्धीचाहिँ धर्मलाई मानव जीवनका लागि आवश्यक मान्थे, सबै धर्मका राम्रा कुरा आत्मसात् गर्थे र सर्व धर्म समभाव राख्थे । यो धर्मनिरपेक्षता अमेरिकाले अँगालेको सर्व धर्म समानको धारणाजस्तै थियो ।
नेपालले पनि आफूलाई सुहाउँदो धर्मनिरपेक्षता अपनाउनुपर्छ, जहाँ नागरिक धर्मपालन गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भने राज्य धर्मबाट अलग, अथवा निरपेक्ष । बहुधर्म, बहुपहिचान, बहुभाषा र विविध पोसाक यसको मूलमन्त्र हुनुपर्छ, तब मात्र धर्मजनित विकृतिबाट जोगिँदै धर्मसुलभ गहिराइबाट लाभ लिन सकिन्छ र यसको विषबाट बच्न सकिन्छ । प्रकाशित : वैशाख ११, २०७६ ०८:१६
संस्कृत हिँडेको बाटो
संस्कृत विरोधीहरूले संस्कृतविरुद्ध गहिरो विश्लेषणात्मक तर्क दिन सकेनन् । जात सम्बन्धित नारा दिएर पन्छिए, जुन पूर्ण पाठ हुन सक्दैन ।
पुस २१, २०७५ प्रमोद मिश्र
काठमाडौँ — संस्कृतको महत्त्व र यसको उपेक्षाबारे नेपाल र भारत दुबै देशमा विलौना हुँदै आएको छ । नेपाली मिडियामा यसको चर्चा–परिचर्चा जारी छ । कतै संस्कृत आधारित कर्मकाण्डको शिक्षा दिई पण्डित तयार पारिँदै गरेको सुखद समाचार उल्लेख हुन्छ ।
कतै काठमाडौं समाजका जानेमाने व्यक्तिलाई प्रख्यात संस्कृतविदबाट संस्कृत ज्ञानको ‘ट्युटोरियल’ र संस्कृत लोपको विलौना पाठ गराइन्छ । संस्कृतबारे चर्चा हुनु स्वाभाविकमात्रै नभई आवश्यक पनि छ, नेपाली भाषा र साहित्य(वाङ्मय) र हिन्दु संस्कृतिको आदिस्रोत संस्कृत भएकाले ।
दक्षिण एसियामा रविन्द्रनाथ टेगोरका रचना कसरी विश्व प्रसिद्ध भए ? किनभने विधा जुनसुकै भए पनि तिनको साहित्य दृष्टि पाश्चात्य, लोकभाकाका समसामयिक तत्त्वहरू संस्कृतजनित ज्ञान परम्पराद्वारा सिञ्चित थियो । क्यारिबियन कवि नाटककार डेरेक वालकाट विश्वविख्यात कसरी भए ? किनभने तिनका क्यारिबियन समुद्री गाथा ल्याटिन र प्राचीन ग्रिक महाकाव्य र मिथकबाट पुष्टित थिए ।
तर अहिलेको गणतन्त्रमा पनि संस्कृतबारे एकपक्षीय अलापमात्र पाइन्छ । गणतन्त्रपछि संस्कृत विरोधीहरूले चर्को नारा लगाए । जुन स्वाभाविकै थियो । फलस्वरूप संस्कृतको पठन–पाठनमा कमी भयो । यसलाई अनिवार्य विषय बनाइएन । तर संस्कृत विरोधीहरूले संस्कृत विरुद्ध गहिरो विश्लेषणात्मक तर्क दिन सकेनन् । जात सम्बन्धित नारा दिएर पन्छिए, जो पूर्ण पाठ हुन सक्दैन ।
संस्कृतलाई यसरी तर्क–वितर्क नगरी फाल्नु बच्चालाई ‘बाथ वाटर’संँगै मिल्काउनु हो, भुससँगै चामल पनि फाल्नु हो । तर संस्कृतको वर्चस्व ज्यौंकात्यौं स्वीकार्नु पनि हिन्दु जातीय व्यवस्थाको हैकम र यसको पदानुक्रम सोपानलाई निरन्तरता दिनु हो ।
हिन्दु राज्यव्यवस्थामा सदियौंदेखि संस्कृतमाथि ब्राह्मणको एकाधिकार रह्यो र अरूलाई यसबाट वञ्चित गराइयो । जहाँ हिन्दु राज्यव्यवस्था थिएन, जस्तै अंग्रेज शासित भारत, त्यहाँ पनि समाजले संस्कृतलाई ब्राह्मणकै एकाधिकारमा राख्यो, पूजापाठ, भागवत–पुराण वाचनमा । हिन्दु राज्यव्यवस्थामा तथाकथित तल्लो जातलाई संस्कृत पठन–पाठन निषेध नै थियो । संस्कृत शिक्षा या त गुरु परम्परा अनुसार गुरुको सान्निध्यमा गुरुकुलमा हुन्थ्यो या संस्कृत विद्यापीठ अन्तर्गत । यी दुबै राज्य सम्पोषित हुन्थे वा सम्पन्न जातीय समाजले यिनको भरणपोषण गथ्र्यो, जहाँ जातीय सनातनी रूढीबाट बच्ने कुनै उपाय नै थिएन ।
नेपालकै संस्कृत अध्ययन–अध्यापनको इतिहासलाई हेरौं । राणाशासनमा त पूजापाठका लागि मात्रै कर्मकाण्डी ब्राह्मणले संस्कृत पढ्न पाउँथे । आम जनताका लागि शिक्षा नै निषेध भएकाले संस्कृतको कुरै के गर्ने † तर राणा शासनपछि पनि गुठी सञ्चालित, राज्य सम्पोषित संस्कृत पाठशालामा ब्राह्मणका छोराले मात्र भर्ना पाउँथे । हुन त यो आरक्षण हिन्दु कर्मकाण्ड सम्पादनका लागि भनेर गरिएको थियो । तर तीनधारा पाठशालाबाट उत्पादित छात्रमध्ये कति कर्मकाण्डी पण्डित भए ? कति सीडीओ र मन्त्रालयका सचिव भए ? पञ्चायतको शेषकालमा पचहत्तर जिल्लामध्ये चालीसमा तीनधाराका विद्यार्थी सीडीओ थिए भनिन्छ । सचिव त कति हो कति । संस्कृत पठन–पाठनमा यो आरक्षण अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा यथावत छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
सन् २००७ मा मैले अमेरिकी कलेजका पच्चीसजति विद्यार्थीलाई एक सेमेस्टर भारतभरि घुमी–घुमी साहित्य, संस्कृति, समाज र पर्यावरण पढाएँ । त्यसक्रममा हामी दस दिनका लागि वाराणसी पुग्यौं । ‘गंगा मैली है’ भन्ने विषयमा संकटमोचन मन्दिरका महन्थबाट र बनारसको प्राचीन र आधुनिक महिमाबारे बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका विद्वानहरूबाट प्रवचनपछि एकदिन हामीलाई पण्डित तयार गर्ने पाठशाला लगियो । दस–पन्ध्र जनाजति किशोरले वेद पाठ गरिरहेका थिए ।
घिमिरे थरका नेपाली पण्डित तिनका शिक्षक थिए । ‘यी मेरा छात्र भारतका विभिन्न राज्यबाट आएका छन्,’ तिनले भने । मेरा एक छात्रले प्याच्च सोधिहाले, ‘यी विद्यार्थी कुन जातबाट आएका हुन्, महाशय ? भर्खरै डा. मिश्रले हामीलाई जाति व्यवस्थाबारे पढाउनुभएको छ । यहाँ कोही दलित वा अरू कुनै समुदायबाट आएका छन् ?’ यी सबै विभिन्न थरका ब्राह्मण जातिबाटै आएका हुन् भनेर तिनले भने । उत्तर सुनेपछि मेरा छात्रछात्रा एकछिन पनि त्यहाँ बस्न मानेनन् । मलाई लाजमर्दो भयो । हालै नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित नेपालका यस्तै पुरोहित उत्पादन गर्ने पाठशालाबारे पढ्दा संस्कृत शिक्षाको जातीय समीकरणमा परिवर्तन आएजस्तो लागेन ।
संस्कृतमा विद्रोही विचारै नभएको होइन । दक्षिण एसिया विशेषज्ञ डेविड सुलमनका अनुसार उपनिषदमै पनि ब्राह्मण वर्चस्वको विरोध र यस विरुद्ध विद्रोह पाइन्छ । वैदिक कर्मकाण्ड समेतको विरोध पाइन्छ । समानताका पक्षमा, संस्थापन विरोधी, विद्रोही विचार शास्त्रीय परम्परामा सधैं रहँदै आएको छ । दक्षिण भारतमा वीरसैव विचारकहरूले संस्कृतमा असमान ढाँचा, पदानुक्रम सोपान, कर्मकाण्ड र मन्दिर विरुद्ध पुरै आन्दोल चलाए ।
तिनीहरूको ग्रन्थ श्रीकरभाष्यमा यसको प्रमाण प्रशस्त पाइन्छ । कन्नौजमा अभिनान्द र तिनका समकालीनहरूका संस्कृत श्लोकहरूमा दलित जीवनबारे सहानुभूतिपूर्ण वास्तविक चित्रण गरिएको छ ।तर यी सब हुँदाहुँदै पनि संस्कृत पठन–पाठन र यसका विद्यार्थी भर्नामा ढाँचागत परिवर्तन किन हुनसकेन ? अहिले पनि नेपाल र भारतमा यी संस्कृत गरुकुल र विद्यापीठहरूमा औपचारिक या अनौपचारिक तवरमा ब्राह्मणेतर जात, खासगरी दलित समुदायका विद्यार्थीमाथि बन्देज किन छ ? यसका राजनीतिक र सामाजिक कारण छन् ।
भारतमा मुसलमान र अंग्रेज शासनका बेला संस्कृत ज्ञान ब्राह्मणका जिम्मा रह्यो र तिनैले यसलाई जोगाएर राखे । तर जब भारत स्वतन्त्र हुनलाग्यो र भयो, संस्कृत ज्ञानका हिसाबले तीन धारबाट बेवारिसेमा पर्‍यो । तीनमध्ये मुख्य धारलाई नेहरू–गान्धी र तिनका पाश्चात्य उदारवादले प्रतिनिधित्व गरेको थियो । गान्धी र नेहरू दुवै संस्कृत जान्दैनथे र तिनीहरूको शिक्षादीक्षा र अभिमुखीकरण अंग्रेजी माध्यममा पाश्चात्य प्रणालीबाट भएको थियो ।
लङ्गोटी–धोती लगाए पनि, खेतमा शौच गरी मल तयार पार्ने कुरा गरे पनि, गुजरातीमा लेखे पनि, भारतलाई औद्योगिक हैन, ग्रामीण लघु र चर्खा क्रान्तिद्वारा विकास गर्ने कुरा गरे पनि, नजानेकाले वा संस्कृत ब्राह्मणमा आश्रित भएकाले, संस्कृतप्रति गान्धीको अनुराग थिएन ।
आफ्ना किताबहरूमा प्राचीन भारतको जतिसुकै गुनगान गरे पनि अंग्रेजीपरस्त नेहरूले संस्कृतको संरक्षण गर्ने कुरै भएन । न्युयोर्क र लन्डनमा पढेका दलित विचारक अम्बेदकर ब्राह्मणाश्रित संस्कृतका सोझै विरोधी हुने नै भए । बाँकी रहे सावरकर र गोलवाकर नितृत्वका हिन्दुवादीहरू । संस्कृत साहित्य र दर्शनभन्दा पनि तिनीहरूको ध्याउन्न हिन्दुवादी शासन र गैरहिन्दु, खासगरी मुसलमान विरोधी क्रियाकलाप र विचार प्रतिपादनमै केन्द्रित रह्यो ।
तर यीमध्ये कसैले चाहेको भए पनि पहिले हिन्दु जाति व्यवस्थामाथि मौलिक आधारभूत प्रहार नगरी संस्कृतको उद्धार गर्न सम्भव थिएन । नेपालमा भने राणाहरू त निरक्षर नै थिए भन्दा पनि हुन्छ र तिनले निरक्षरता नैआफ्ना रैतीमाथि थोपरे । र २००७ सालपछि लोहिया समाजवादी वा कम्युनिस्ट भएकाले बीपी लगायतका नेताहरूमा संस्कृतजनित ज्ञान थिएन । र भए पनि कतिपय सनातनी ब्राह्मण कांग्रेसीजन भएकाले जाति व्यवस्थाको संस्थागत र ढाँचागत विरोध र संस्कृतबाट जातीय वर्चस्व उन्मूलन गर्न सक्दैनथे ।
त्यसैले आजपर्यन्त पनि राज्य र समाज सम्पोषित संस्कृत शैक्षिक संस्थाहरूमा ब्राह्मणलाई नै भर्ना लिइन्छ वाग्राह्यता दिइन्छ । अनि संस्कृत सर्वस्वीकार्य कसरी होओस् र यसको अरू जाति–समुदायद्वारा विरोध किन नहोस् ?
संस्कृतलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन दुइटा कार्य गर्नु अनिवार्य छ । एक, सबै संस्कृत पाठशालामा सबै जात वर्गलाई प्रलोभन र आरक्षणसहित भर्ना दिनुपर्छ । दुई, कर्मकाण्डी पण्डित जुनसुकै जातिको योग्य व्यक्ति पनि हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । यी काम सामाजिक र संस्थागत रूपमा हुने बित्तिकै ब्राह्मणेतर समुदायमा संस्कृत विरुद्ध सहस्राब्दियौंदेखिको विरोध र पूर्वाग्रह हराएर जान्छ । र अर्को कुरा संस्कृत पठन–पाठनमा भाषा सिक्नमा बढी र व्याकरण घोक्नमा कम जोड दिनुपर्छ ।
यसका लागि अमेरिका, युरोपमा जसरी भाषाशास्त्रीय आधारमा संस्कृत पढाइन्छ, त्यसरी नै पढाउनुपर्छ । किनभने संस्कृतको घोकन्ते प्रणाली अरू विषयमा पनि सरेकाले दक्षिण एसियाकै शिक्षा प्रणाली सोचनशीलभन्दा पनि आँखा चिम्लेर पछिलाग्ने भिड उत्पादन गर्ने कारखाना बन्न पुगेको छ । नेपाल र भारतका स्कुल, कलेजमा मैले दस वर्ष संस्कृत पढेंँ । व्याकरण घोक्नु र साहित्य अनुवाद गर्नुबाहेक मैले केही गरिन । फलस्वरूप दस वर्षपछि पनि श्लोक र शब्द र धातुरूप त मलाई निकै कण्ठस्त भए, तर मैले संस्कृत बोल्न–लेख्न भने जानिन ।
तर आजका दिनमा संस्कृतविद र संस्कृत पक्षधरहरू संस्कृत पतनको विलौनाले नपुगेर हिन्दुत्ववादी पनि बन्नपुगेका छन् । तिनीहरूको हिन्दुत्ववादको त आम जनसमुदायले विरोध गर्ने नै भए । त्यही विरोधमा तिनको संस्कृत जगेर्ना गर्ने दलील पनि पानीको फोका बनेको छ । वास्तवमा यो अवस्था साहित्य, कला, समाज, दर्शन, र वैचारिक गहनताका लागि बडा उदेकलाग्दो हो । किनभने संस्कृत यी सबैको स्थानीय अथाह स्रोत हो, जोबिना महान साहित्य र दर्शन नेपाल र भारतमा जन्मिन गाह्रै छ ।
मिश्र संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयमा अंग्रेजीको विभागाध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित : पुस २१, २०७५ ०७:५९